HMN:- Dhuuqmada waxaa ugu macaan in labada raaxeysanaya midba mid kale hal bishin ka dhuuqo tusaale in ninka dhuuqo bishinta hoose ee haweeneyda halka iyaduna ay ay si xaaso ay ku dheehantahay ay u dhuuqeyso midda sareeysa. Waxaa xusid mudan in dhuuqmada ay dhowr nooc kala leedahay waxaana ugu macaan midda sida aayarka la isku daliigo iyadoo la isku xanxanteeynayo.
Xubinta Ugu Muhiimsan Dhuuqmada Ibta Naaska. Haweenka kacsi waali ah ayay ka qaadaan iyo istiimin aad u macaan marka si toos looga nuugo ibta hore ee Naaska iyioo si khafiif ah ilkaha ugu qabanaya sida adigoo wax qaniinaya oo kale. Sidoo kale Haweenka qaar waxeey raaxada ka helaan Dhunkashada xabdka gaar ahaan inta u dhaxeyso labada Naasood iyo cambarada qoorta kadibna gacanta mar mari Xubinta taranka haweenka iyadoona ay ka dhalaneyso raaxo Waali ah.